Shiinaha SINHAI jiingado caag saqafka polycarbonate sheet warshad iyo saarayaasha | SINHAI
SINHAI dusha saqafka dusha sare ee dusha sare ee balaastigga ah ee polycarbonate
Xaashida marmarka polycarbonate shaashadda xaashida, waxaa loogu yeeraa PC go'yaal jiingado iyo PC alwaaxa jiingado ee injineernimada, waxayna ka sameysan yihiin polycarbonate walxo ceeriin ah oo la soo dhoofiyay.
PC sheet sheet jiingado waa nooc ka mid ah polycarbonate sheet jiingado leh tayo sare leh iyo adkaanta. Astaamaheeda waa iska caabin saameyn sare leh, cad, culeys fudud, kala duwanaansho iyo UV
Dulqaadka khadka. PC sheet sheet jiingado muujinaysaa iska caabin cimilada, cimri dherer, iyo iska caabin ah dabka. Anti-ultraviolet, gabowga
Qaabku waa mid aan loo aabbo yeelin, wuxuu noqon karaa mid qabow sameeya, iska caabbinta saamaynta, PC waa nooc ka mid ah caabbinta saamaynta ku jirta thermoplastics-ka. Qalabka qoraxda ee laga sameeyay PC-ga waxay ilaalin karaan caabbinta saameynta wanaagsan muddo dheer ee heerkulka ballaaran. Waxaa jira "muraayad aan jabin" iyo "bir birqeed". Sumcaddeeda ayaa ah in xoogga saameynta PC-ga lebbiska daahsoon uu 30 jeer ka yahay isla dhumucda xaashida looxa.
Wareejinta iftiinka waxay kuxirantahay midabka, gudbinta iftiinka waxay gaari kartaa 12% -88%
Kaydinta tamarta waxay si wax ku ool ah u yareysaa isticmaalka tamarta ee hagaajinta heerkulka dhismaha
Dib-u-dhaca ololku waxaa loo kala saaraa inuu yahay fasalka B olol-celinta
Midab Caddaan, cadaan, caano caano ah, Buluug, Harada Buluug, Cagaaran, Naxaas ama Customized
Ballaaran 760mm, 840, 900, 930, 960mm, 1000mm, 1060mm, 1100mm, 1200mmor loo habeeyay
Dhererka Guud ahaan 6m, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Oogada UV-ilaalinta, ka-hortagga ceeryaanta, dhajinta, barafoobay
Nooca shirkadda Soo saaraha xaashida polycarbonate
Goobta Warshadda Baoding, gobolka hebei, Shiinaha
Ka dhig xaashida saqafka ugu habboon ee guryaha, barxadaha, gawaadhida gawaadhida, balkooniyada, sariirta, shaashadaha, teendhooyinka iyo barkadaha lagu dabaasho. PC jiingado guddiga sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida qalabka saqafka loogu talagalay dhismayaasha warshadaha iyo beeraha.